isixhosa-home « Civil Engineering
Idama laseBerg River eFranschhoek – esinye isifundo sobunjineli esibizwa ngokuba yihydraulic siqhuba kakuhle kakhulu.
Ubunjineli kwezothutho – ukugcina okubalulekileyo kwilizwe kusebenza.
ukusebenza nzima elebhu.
Ukuboniswa ngezona ngxaki zobunjineli yinxalenye yoqeqesho lwethu esilubonelelayo.
Ithala lezobunjineli likwabonelela ngezixhobo ezinokuba luncedo ezikumgangatho ophezulu elizweni.
Kukwatyelelwa nendawo ekufutshane eseStrand – kudityaniswa izifundo nolonwabo!
Isebe lethu likwabonelela ngeendawo ezintle ezinokubukwa kwiintaba zaseStellenbosch!
Ukutyelela iindawo zobunjineli emini emaphandleni nako kunegalelo kwizifundo zethu.
IStellenbosch yidolophu entle onokuyibuka uzihambela ngeenyawo.
Abafundi abenza unyaka wabo wokugqibela baqubisana nabahlohli babo kumabala eqakamba.
Abafundi bayazipholela kweyona ndawo yabafundi ebizwa ngokuba yistudent centre, eyaziwa
Wamkelekile kwiSebe lezobuNjineli kwezokwakha iindlela neebrorho, elinye lamasebe eCandelo lezobuNjineli kwiYunivesithi yaseStellenbosch. Apha uza kufumana iinkcukacha zoqhagamshelwano, iingxelo ezineenkcukacha ezihlaziyiweyo ngophando olwenziwe liSebe, okupapashwe ngabasebenzi, iinkcukacha ngezifundo nezixhasa abasebenzi kunye neenkcukacha ngezifundo, izifundo ezisemva kwesidanga sokuqala kunye neendaba ezintsha. Ungazifumana nezinye iinkcukacha ezifanelekileyo ngezifundo ezisemva kwesidanga sokuqala kwincwadana yethu.
ZIFAKWA APHA IZICELO ZEZIFUNDO ZESIDANGA SOKUQALA
ZIFAKWA APHA IZICELO ZEZIFUNDO EZISEMVA KWESIDANGA SOKUQALA
Ngoko ke simalunga nantoni na isifundo sobunjineli bezokwakha iindlela neebhulorho? Ividiyo iyasibonisa ngeenkalo ezikobu bunjineli bokwakha, ukukunceda uthathe izigqibo zokuba ingaba luhlobo lomsebenzi ongawonwabela na lo.
Izifundo zesidanga sokuqala
Umsebenzi wobunjineli kwezokwakha ubonelela ngemisebezi egqwesileyo kumadoda nabasetyhini. Izithuba ezininzi nezahlukeneyo kumacandelo karhulumente nabucala zizaliswa ziinjineli, ukususela kwabasemagunyeni ekuhlaleni ukuya kumasebe karhulumente, nokususela kwabo bacebisa ngezobunjineli ukuya kwiinkampani ezinkulu zokwakha zamazwe ngamazwe.
Njengebhonasi, uzokwazi ukufunda kwenye yezona khampasi zintle kakhulu elizweni! Le yimimandla oza kufunda kuyo njengomfundi oza kwenza isidanga sakho sokuqala:
UbuNjineli boPhando ngoMhlaba namatye nezoThutho
UbuNjineli boPhando ngoMhlaba namatye nezoThutho licandelo lezobunjineli kwezokwakha iindlela nezakhiwo nto leyo ijongene nesimo sezixhobo zomhlaba. Ubunjineli bezoThutho kukusetyenziswa kobunzululwazi nobuchwephesha okujongene nokuhamba kwabantu nempahla ngendlela ekhuselekileyo, efanelekileyo nezinzileyo. Kuqukwa uphando, ukwenziwa komgaqo-nkqubo, ukucwangciswa kwezinto, ukuyilwa, ukuphunyezwa, ukusetyenziswa nokulawulwa kwazo zonke iindlela zokuhamba.
Ubunjineli obujongene nezakhiwo ezinkulu neebhulorho kwaneendlela
Ubunjineli obujongene nezakhiwo ezinkulu licandelo lobunjineli bokwakhiwa kwezakhiwo neendlela nezakhiwo ezifana nezo. Kuqwalaselwa kubunjineli obujongene nezakhiwo, iindlela neebhulorho kwaye oku yeyona ndlela ibalulekileyo, imifuziselo neenkqubo zobunjineli bokwakha kunye nobuchwephesha kwiinkcukacha. Oku kubonelela ngesiseko sokulungiswa ngendlela iingxaki zekhompyutha ngendlela ubuchwephesha beenkcukacha bunokusetyenziswa khona.
Ubunjineli kwezaManzi nezokusiNgqongileyo
Ubunjineli kwezaManzi nezokusiNgqongileyo bunento yokwenza nokuphuhliswa nokulawulwa kwezibonelelo zamanzi, ukuhlahlela koko kuveliswayo, izifundo ezidibene nokuhamba kwamanzi amancinci nezintyalantyala, ukusebenza ngoxinezelelo lwamanzi asemilanjeni, ukuyilwa kwezinto ezijongene noxinezelelo lwamanzi ezifana namadama, iitonelo nezikhululo ezikhuphela amanzi, iinkonzo zamanzi, umgangatho wamanzi nokulungiswa kwamanzi, kunye nobunjineli obujongene nonxweme namazibuko.
UbuNjineli kwezoKwakha noLawulo
UbuNjineli kwezoKwakha noLawulo bujongene nolawulo kuzo zonke iinkalo zophuhliso lweziseko ezingundoqo, kuquka ofumana iinkonzo, umcebisi nomakhi. Bujongene neeprojekthi ezinkulu kwaye buqwalasela ukwakhiwa kwezakhiwo ezinemigangatho (modular construction), ulawulo lokusemngciphekweni kulwakhiwo, ulawulo lokuyilwa kwezinto nolawulo lweziseko ezingundoqo.
Izifundo ezisemva kwesidanga
Umsebenzi wezifundo ezisemva kwesidanga kwisebe lethu ubonelela abafundi bakwazi ukusebenzisa iilebhu ezikumgangatho ophezulu namaziko. Siyabamkela abafundi abenza ezi zifundo emva kwezidanga abanazo abanomdla abasuka mbombo zone zomhlaba. Isebe libonelela ngoluhlu lweenkqubo ezibonelela abafundi abenza izifundo ezisemva kwezidanga zabo zokuqala, ezizezi:
IiMasters kwezobuNjineli (Ezilungiswe ngendlela ethile)
IiMasters kwezobuNjineli (uPhando)
UbuGqirha kwiFilosofi (kwezobuNjineli)
UbuGqirha kwezobuNjineli – isidanga se-D Eng
IDiploma esemva kwesidanga
Ukutshintsha i-PDE ibeyi-M Eng
Bona iSebe, ikhampasi kunye nokungqonge i-CivEng